Home » Caafimaadka » Waa maxay caafimaadka?
Hey’adda caafimaadka dadweeynaha waa hey’ad dowladeed oo qaranka mas’uul looga dhigay arimaha ku saabsan caafimaadka dadweeynaha. Waxeey hey’addan uu shaqeeysaa si dhamaan dadka Iswiidhan joogo uu helaan caafimaad fiican. Hey’adda caafimaadka dadweeynaha waxeey si gaar uga shaqeeysaa kow iyo toban qeeyb oo kala duwan. Qeeybahaas waa:
Bey’addaha iyo badeecada.
Ayadoo ee hey’addaha dowladu uu shaqeeyaan sida usii ficneey lahayeen caafimaadka-dadweeynaha, waxaa wali sii jiro farqi uu dhaxeeyaa caafimaadka kooxyo kala duwan oo ka tirsan bulshada. Dakda waxbarshada yar iyo dakhliga yar leh waxeey inta badanaa ka caafimaad xunyihiin dadka ka waxbarasho badan, kana dhaqaalo badan.
Jirka waxuu uu baahnyahay maadooyin kala duwan. Si aad u hesho dhammaan maaddooyinka jirku u baahan yahay waxaa muhiim ah in aad cunto cuntooyin kala duwan. Haddii aad cunto quraacda, qadada iyo cashada waqtiyo go’an, waxaa fududaaneeyso in aad cunto in kugu filan.
Hey’adda arrimaha raashinka (Livsmedelsverket) waa hwy’ad dowladeed oo ka shaqeysa arrimaha la xiriira cuntada. Hey’adda arrimaha raashinka waxaay ku siineeysaa talooyin badan oo ku saabsan cuntada u wanaagsan caafimaadka, tusaale ahaan:
Waxaad badsataa oo cuntaa khudaarta iyo cagaarka. Dooro khudradda waaweyn iyo kuwa salka leh, kaabashka nuucyadiisa kala duwan, digir iyo basal. Faa’iido caafimad oo badan ayey leedahay cunidda khudaarta.
Isticmaal subagga faa’iidada leh marka aad cunto karineyso, sida ooliyada geed gaabka iyo subagga faa’iidada leh.
Dukaamada cuntada waxaa yaal cuntooyin ay ku dhegsan yihiin sawir u eg daloolka furaha. Waxaa cuntada noocaas ah ku yar dufanka, sonkorta iyo cusbada. Waxaana ku badan maaddada fiber marka la barbar dhigo cuntooyinka aan calaamaddas lahayn. Hey’adda arrimaha raashinka waxey talo ku bixineysaa cunto eey baakadahooda ku sawirantahay duleelka furaha.
Caruurta waxeey uubahan yihiin in ee cunta nafaqo leh ku cunaan xilliyo go’an. Si ay si six ah ugu koraan oo ugu weynaadaan.
Bogga internetka Hey’adda arrimaha cuntada www.slv.se ayaa ka akhrisan kartaa warbixin dheeraad ah oo ku saabsan cuntada caruurta uu wanaagsan.
Caafimaad galmo waxaa loola jeedaa in caafimaadkaada jir ahaneed, mid maskaxeed iyo bulshadeed uu okeey yahay iyadoo laga duulayo galmadaada. Waxey ku saabsantahay xuquuqda ah inaad jirkaada u isticmaali kartid sida aad rabtid adigoon khatar u galineyn kufsi, xoog ama takoorid. Caafimaad taran waxuu ku saabsanyahay warbixinta, daryeelka iyo adeegga uu oqf walba xaqa u leeyahay si uu u qorsheeyo dhlid carruur. Waa in la helaa daryeel fiican marka uu cunuga dhalanaayo, helitaanka daawada uur joojinta iyo inaad ilmaha si halis la’aan ah aad isaga soo ridi karitd. Qof kasta waxeey xaq u leedahay ineey go’aamiso haddii ey rabto ineey carruur dhasho iyo haddii kale.
Study of meditation »
4 September, 2012 // Uncategorized, Wararka
21 August, 2012 // Uncategorized
Jogging in the morning »
24 June, 2012 // Uncategorized